Ikhaya STARS E-EUROPE Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso kaLifeBogger
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Mnumzane Consistent“. Indaba yethu ye-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
I-Kieran Tierney Childhood Indaba- Ukuhlaziywa. Ikhredithi ku- TeamTalk futhi CelticQuickNews
Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe yobusha, isizinda somndeni, imfundo / umsebenzi okwakha umsebenzi wakhe, impilo yakhe yokuqala yokusebenza, indlela eya endabeni yodumo, ukukhuphuka kudumo lendaba, ubudlelwane, impilo yomuntu siqu nendlela yakhe yokuphila njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungubani unekhono kakhulu kwesobunxele emuva owenza i-Arsenal namanye amakilabhu aphezulu we-Premier League acele emadolweni ukusayinwa kwakhe. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaKieran Tierney ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
U-Kieran Tierney wazalwa ngosuku lwe-5th ngoJuni 1997 kunina, uGail Tierney noyise, uMichael Tierney, e-Ireland Sea, u-Douglas, inhloko-dolobha enkulu ye-Isle of Man.
UKieran Tierney unemvelaphi yakhe yomndeni nezimpande HHAYI kusuka eNgilandi, e-Ireland noma eScotland enkulu, KODWA kusuka e-Isle of Man, isiqhingi esigoqeke ogwini oluwugwadule, izinqaba zasendulo ezifanekiselwa ngezansi.
I-Kieran Tierney- Impilo yasekuqaleni kanye nesizinda semindeni. Isikweletu kuDigimap
Futhi kumvelaphi yomndeni wakhe nomlando wakhe, kungenzeka ukuthi okhokho bakaKieran Tierney babephakathi kwalabo abahlupheka esandleni sabahlaseli beViking. Lawa kwakunguNorsemen okuthi kusukela ngasekupheleni kwe-8th kuye ngasekupheleni kwekhulu le-11th ahlasele iBrithani. Uthi bewazi?… Izwe lakubo likaKieran Tierney likaDouglas liqoshwe emlandweni njengendawo yokuqala eGreat Britain eyahlaselwa ngayo Ukuhamba ngokuqondile kuzungeze i-AD 793.
Umbhali webhola lesiNgisi onezimpande zemindeni yaseScotland wazalwa njengomunye wezingane ezimbili kumama wakhe othandekayo, uGail nobaba uMichael (bobabili abasesithombeni ngezansi) ababekhona kuma-50 abo njengasesikhathini sokubhala.
Kieran Tierney Bazali
UKieran wakhula nodadewabo omdala kanye nabazali bakhe e-Muirhouse, indawo yokuhlala esenyakatho ne-Edinburgh, inhloko-dolobha yaseScotland. U-Asides uphila impilo ejwayelekile esengumfana, imibiko ithi njengengane yokuzalwa yokugcina, uKieran waqale wanyathelwa kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabekwa ngabazali bakhe.
U-Kieran Tierney wakhula njengomuntu othanda ubufana beCeltic. Inhloko yomndeni wakhe (ubaba wakhe), uMichael waqinisekisa ukuthi wonke amalungu omndeni angabaphathi bamathikithi esikhathi seCeltic. Empeleni, yonke imindeni yakhe yayingabalandeli beCeltic abangafisi nebhola leqembu elihamba ngemithambo yabo.
Lapho esengumfana, uTierney wayevame ukucela umama wakhe ukuthola ijezi leCeltic njalo ngoKhisimusi. Enye into angayikhumbula ngesikhathi esemncane kwaba yisikhathi iCeltic ayinqoba kabili iScotland Premier League kanye nendebe yeligi, okuyinto eyamenza wanquma ukuba ngumdlali webhola lezinyawo.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Abazali bakaKieran Tierney bamfundise kwesinye sezikole ezihamba phambili i-Motherwell ngqo eSt Brendan's RC Primary. Kamuva, uTierney waqala ukuya e-Our Lady's High School nayo eseMotherwell. Uthi bewazi?... Wazijabulela izinsuku zakhe zemfundo yobuntwana ngoba umama wakhe, uGail Tierney wayeyintokazi edla isikole esikoleni sakhe.
I-School Quiz eyaholela ekutheni idrayivu yakhe ibe yi-professional:
Ukunikeza i-akhawunti yezinsuku zakhe zobuntwana esikoleni, u-Kieran wake wathi;
“Ngesikhathi ngisesikoleni, kwathiwa masikhethe izifundo zethu bese sibeka phansi lokho esifuna ukukwenza njengomsebenzi lapho sesikhulile. Ngangihlala ngikhetha ibhola kodwa uthisha wami ungitshele ukuthi angikwenzi lokho. Esikhundleni salokho, kufanele ngibhale phansi i-'Joiner 'noma yini ehlobene".
Uma kwenzeka ufunda ungazi, “Joyina"Ngumuntu omsebenzi wakhe ukwakha izakhi zokhuni zesakhiwo, njengezitebhisi, iminyango nohlaka lwamafasitela. UTierney wasenqaba ngokuphelele isiphakamiso sikathisha wakhe wokuba yiJoyina. Kusukela ngalolo suku, wafunga ukuthi uzofakazela ukuthi uthisha wakhe unephutha ngokuthatha kuqala ukunamathela ephusheni nephupho lokuba ngumdlali webhola lezinyawo.
Isifiso sakhe sokudlala ibhola lomncintiswano wesikole sambona ejoyina iSt Ninian's High School. Lesi sikole esiseKirkintilloch saba nobudlelwano bokuthuthukiswa kwebhola lentsha neCeltic football club. Isifiso sikaKieran Tierney ngebhola elilandelwa ukusebenza ngokuzikhandla emaphepheni akuzange kumenze abe namandla ngokomqondo kuphela kepha kwamenza waqashelwa yiCeltic academy eyayimmemele izivivinyo.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Isifiso sikaKieran Tierney ngalo mdlalo sambona edlula ekulingweni ngemibala ezindizayo futhi ejoyina iCeltic academy njengomuntu oneminyaka eyi-7. Lapho ujoyina, bekumnandi, kepha uTierney kwadingeka azidele kakhulu. Kwakunezikhathi lapho ayephuthelwa khona amaphathi okuzalwa noma izinto ayezilangazelela ekhaya lomndeni wakhe. Kepha ngasohlangothini lweflip, wayedlala ibhola futhi enza lokho ayekade ekuthanda.
UKieran Tierney wazibona elandela iphupho lakhe lokujoyina iCeltic. Isikweletu IG
Ukunikeza i-akhawunti yokuthi abazali bakhe bameseka kanjani emsebenzini wakhe osemncane, u-Kieran wake wathi ngobaba wakhe.
“Ubaba wadela wangidela kakhulu ngenxa yami. Wayehlala engiphelezela ukuya e-pitch ngisho nangeSonto. Ubaba wami wayenozimu omkhulu kunami futhi ngiyabonga kakhulu ngakho. ”
Uthi bewazi?… U-Kieran Tierney waqala njengomnqobi wesobunxele futhi AKUSI-back-back. Ngaleso sikhathi, umqeqeshi wakhe weCeltic academy, uMartin Miller, wayegcizelela ukuthi uzohlala ewina. Ukuba naleso simo sengqondo seCeltic kumbone ehlanganisa izinto eziningi eziza kuqala ngenkathi ekilabhu. Enye yalokho kufaka ukuba ngumfana webhola.
Uthi bewazi?… U-Kieran Tierney wayengomunye wabafana bebhola ebekhumbuleka iCeltic Champions League ebusuku lapho iklabhu yathusa umhlaba wonke ngokushaya iFC Barcelona 2-1 ngoNovemba 2012. Ngezansi isithombe sakhe ebukeka ejabule kakhulu emisebenzini yakhe yebhola.
UKieran Tierney ubukeka ethokoze kakhulu njengomfana omncane webhola nomdlali we-academy. Isikweletu ku-IG
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Ngenkathi uKieran eqhubeka nokuvuthwa, wazibona esezinza kahle impilo ne-Academy. Wayelwela konke ukwabiwa kwempumelelo ngisho nasenkingeni yokuthola ukuhlanganiswa kweqembu lesizwe. Kodwa-ke, maphakathi nezigaba zomsebenzi wakhe, uKieran waqala ukulwela imidlalo. Ngamazwi akhe;
“Kunesikhathi lapho ngangingawutholi umdlalo. Kwi-14 noma i-15, angikaze ngikhethe iScotland futhi lesi kwakuyisikhathi lapho ngangingekho eqenjini leScotland, futhi angidlalanga nhlobo nebhola leqembu. ”
Ngaphandle kokungabaza, izikhathi ezinjengalezo zazinzima kakhulu ikakhulukazi lapho ezwa ngabadlali akanye naye enza kangcono futhi asayina izinkontileka ezintsha. Okubi kakhulu futhi kwenzeka ngaleso sikhathi. Kwakuyisikhathi u-Kieran Tierney ephuka umlenze lapho esondele (amahora angama-24) wokwenza iqembu lokuqala leCeltic. Ngamazwi akhe adabukisayo;
"Ngisuka kweliphezulu kakhulu engake ngaya kulo eliphansi ngakusasa, kodwa lokho kungenze ngaba umdlali ongcono nomlingisi," kusho uTierney.
Ingozi eyisimanga eyambuyisela emuva yenzeka ngabo-December 2014. Kwaba yinkinga enkulu ukunqoba le nsizwa. Uthi bewazi?… Kwakuyilokho kucabanga kweCelt okwamsiza ukuthi abhekane nalokho akubiza ngokuthi yisikhathi esibi kakhulu sokuba umdlali webhola afise ukuphula umlenze. “Ukwephula umlenze bekuyinto engiyibheka njengengokoqobo. Kungenzeka kunoma ngubani nganoma yisiphi isikhathi ” Kusho uKieran.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Noma elimele, ukuzethemba kukaKieran bekuphakeme kakhulu ukuthi wayenakho ukunambitheka kwebhola leqembu lokuqala. Ngemuva kokuphuma ekulimaleni, waqala lo mkhuba wokuthatha ngokunganaki.
Yize ibhola lebhola lentsha bekungelona nje kuphela elihamba ngomkhumbi kuye iBUT Senior football eyaqala ngoMashi 2016 wakhokha. Ukungena ebholeni eliphakeme kumenze wasebenza kanzima ukwedlula ukuzithola engukaputeni osizayo kule nqubo. Uthi bewazi?… Ukubamba impumelelo yakhe nekilabhu yakhe, uTierney uqhubekile nokuwina iziqu ezine zeScotland Premiership kufaka phakathi i-treble njengomuntu oneminyaka eyi-20.
Ama-Kieran Tierney Celtic Glory Days. Ikhredithi ku- I-DailyMail futhi Scotsman
Esigabeni saseYurophu, uTierney naye uthole izikweletu eziningi. Okunye kwalokhu kwenzeka ngesikhathi enqaba ukuhlangana nomuntu wePSG we- $ 160m I-Kylian Mbappe kanye ne-Bayern Munich lean leqiniso Arjen Robben futhi okubaluleke kakhulu, I-Raheem Sterling.
Ukwenza kahle kakhulu ukufaka amagoli we-Champions League omuhle kakhulu uma ubhekene neManchester City kwachazwa njengomncintiswano omnandi kakhulu weCeltic kwisizini ye-2018 / 2019. Lokhu kwenze amakilabhu e-Premier Premier League abandakanya neMan City bacela emadolweni ukusayinwa kwakhe.
UKieran Tierney Rise to Fame ngokumelene neMan City. Ikhredithi ku- I-GlasgowLive kanye neDailyRecord
Njengoba nje abalandeli abaningi be-Premier League befisa, i-back-back inqume ukulandela ezinyathelweni zika Virgil van Dijk futhi UVictor Wanyama. Uthandile ukuhamba kwe-Premier Premier League ngokujoyina i-Arsenal ehlobo lika-2019 wewashi lomnqamulajuqu.
Kwakuyisinqumo esinzima kunazo zonke empilweni yakhe ukushiya iklabhu ayelithanda kakhulu. Ngaphandle kokungabaza, uKieran Tierney uzoba yimpumelelo enkulu kuPremier League. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe phambili ngokujoyina iligi kaNdunankulu, abalandeli abaningi babezobuza imibuzo evuthayo: “ubani intombi kaKieran Tierney?"..."Ngabe uKieran Tierney ushadile? ”…“ Uma kunjalo, unkosikazi kaKieran Tierney ”
Ngubani i-Kieran Tierneys Girlfriend
Akunakuphikwa iqiniso lokuthi ukubukeka kwakhe okuhle, ukumamatheka kwakhe ngokudidiyela kuhlangene neqiniso lokuthi ucebile bekungeke kumenze abe yisidina kulabo abahlonishwayo besifazane. Kodwa-ke, ngemuva komdlali webhola waseScotland ophumelelayo, kukhona intombi enhle ebabazekayo ehamba ngegama elithi Amy Hale. U-Amy Hale ofanekiselwa ngezansi ngumdansi wase-Irani ovela eKirkintilloch, idolobhana eliseScotland.
U-Kieran Tierney Girlfriend- u-Amy Hale. Ikhredithi ku- Isikhathi sakusihlwa
Iqiniso lokuthi uKieran Tierney uneminyaka engu-22 njengamanje ngesikhathi sokubhala lisho ukuthi umdala ngeminyaka emithathu kunentombi yakhe u-Amy Hale ongu-19.
U-Asides ngokuba yi-WAG, u-Amy ubalwa phakathi kwabadansi abahamba phambili e-Ireland. Njengasikhathi sokubhala, Ilanga laseScotland usanda kuba nemibiko yokuthi ufanelekele ukuthola imiqhudelwano ye-World Irish Dancing Championship ebanjelwe eDublin.
U-Kieran Tierneys Girlfriend we-Amy Hale engutsheni yakhe yokudansa. Ikhredithi ku- Isikhathi sakusihlwa
Umdanso we-Asides, kunemibiko yokuthi u-Amy Hale naye ungumfundi waseyunivesithi. Usezobhalisa eNyuvesi yaseStrathclyde ukuzofunda “Ukufundisa Okuyisisekelo”Njengasesikhathini sokubhala.
Bobabili uBoyfriend nentombi bayathanda ukuzijabulisa ezindaweni ezihle ezingaziwa. Ukwehluka kusuka kusithombe esithandekayo esingezansi, kubonakala sengathi akekho ongamisa laba bantu ekubeni omunye wabashadikazi abashisayo bebhola laseScotland.
UKieran Tierney no-Amy Hale. Ikhredithi ku- IScottish Sun
The iqiniso lokuthi bobabili abathandi bathandana isikhashana kushiya kungangabazi ukuthi umshado noma umshado wabo bobabili kungaba yisinyathelo esilandelayo esihlelekile.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi umuntu ongokoqobo ngemuva kwegama u-Kieran Tierney kuzokusiza uthole isithombe esiphelele ngaye.
Ukuqala phansi, into yokuqala noma ubani angayibona ngoKieran Tierney isimo sakhe esihlaba umxhwele futhi esinamandla engqondweni. Njenge Ngolo Kante, uphakathi kwabathandi bezinyawo abanesimo esihle kakhulu futhi owaziyo ukuthi umhlaba wangempela usebenza kanjani.
UKieran ngumuntu okholelwa ukuthi uyakwazi ukubhekana nezimo ezahlukahlukene azithola ekuso. Into eyodwa ayenza kahle kakhulu yikhono lakhe lokuzibopha nabalandeli bazo zonke izigaba. Isibonelo siyabonakala ngezansi.
I-Kieran Tierney Phasi Emhlabeni Imvelo- Ichaziwe. Isikweletu kwaBTSport
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Wonke amalungu omndeni kaKieran Tierney njengamanje aphila ngamaphupho abo. Bobabili umama wakhe, ubaba, abafowabo, odadewabo kanye nezihlobo zakhe zonke njengamanje bavuna imihlomulo yokuba neyabo eyokuthola esigabeni esikhulu kunazo zonke ebholeni laseBrithani.
UKieren uqobo uhlakazeka kahle emndenini wakhe ikakhulukazi umama nobaba wakhe. Uthi bewazi?… Lapho uTierney esayina isivumelwano sakhe, wathengela umama wakhe nobaba wakhe indlu.
UKieran Tierney- Ukwenza abazali bakhe bajabulele izithelo zomsebenzi wabo.
Ngaphambi nje kokuthuthela kwakhe kuPremier League, uKieran yize esekhokhelwe imali eningi usajabulela izinzuzo zokuhlala nabazali bakhe endlini ayithengile. Ngamazwi akhe;
“Ukuhlala nabazali bami kungenza ngizinze ngandlela thile. Umama wami nobaba basaphethe. Angihleleli ukuphuma futhi ngizohlala ngedwa iminyaka embalwa. ”
Enye yezinzuzo uTierney azithokozelayo esinqumweni sakhe sokuhlala nabazali bakhe ukubona umama wakhe nodadewabo bemnakekela izingubo ezingcolile futhi egeza imisele yakhe okuyinto athanda ukuyishiya egumbini lakhe. Futhi ngamazwi akhe…
"Ababelethi bami bangenzela yonke into futhi abangixiki. Benza konke abangakwenza ukungisiza ekuhambeni, futhi bakwenzile kusukela ngineminyaka eyisikhombisa."
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
UKieran Tierney une-net ebiza i-12,50 Mill. € njengoba ngesikhathi sokubhala. Lokhu ngokusho ukuthi uyisazi sebhola esinamandla.
Uthi bewazi?… Ukukufanele lokhu okuningi kwezinye izindlela ukuhumusha kube yindlela yokuphila yobukhazikhazi. UKieran Tierney unemoto ebabazekayo KODWA alukho uphawu lwezintambo eziwubukhazikhazi, amadayimane namacici we-Stud.
Kieran Tierney LifeStyle. Ikhredithi ku- I-TalkCeltic
UKieran Tierney usebenzisa imali yakhe emndenini wakhe nakubantu abasondelene naye abasiza ekugcineni isabelomali sabo somndeni. Ukuzinikela kwakhe ekuqinisekiseni ukuthi abazali bakhe, izihlobo nabangane abasondelene ngokwezezimali kuyafana nokuzibophezela kwakhe ekupholiseni.
Ama-Kieran Tierney Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukwephula irekhodi le-Arsenal ngaphambi komdlalo wakhe wokuqala:
Uthi bewazi?… UKieran Tierney wake washaya into entsha e-Arsenal yize engazange enze ngisho nesonto lakhe.
U-Kieran Tierney- Ukwephula irekhodi le-Arsenal ngaphambi komdlalo wakhe wokuqala neklabhu. Isikweletu ku-ArsenalTV
Wamangala omunye wabasebenzi bezokwelapha e-Arsenal njengoba eshaya irekhodi lokumelana lika-Aubameyang yize ephethe ukulimala. UTierney wafinyelela isigamu semitha kumzamo wakhe wokuqala we-jump. Wabe esetshelwa ngabasebenzi bezokwelapha base-Arsenal ukuthi baphinde bazame, okuyisikhathi aphule irekhodi. Uthi bewazi?… UTierney ufike kakhulu kwi-55cm eyambona eshaya Aubamyang's irekhodi langaphambilini le-1cm.
Ama-Honold Honours: Ngaphambi kokuza kuPremier League, uKieran Tierney wayenenombolo ehlanganisiwe yeklabhu ye-8 kanye nama-16 ahlonishwayo ngamunye. Thola ngezansi ucezu lobufakazi obuvela kuWiki.
Ama-Kieran Tierney Amaqiniso- Inombolo yakhe emangalisayo yokuhlonishwa
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Kieran Tierney Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.